February 1, 2020 - Myitter
(၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကို ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာနေသူမှ ဆွတ်ခူးရရှိ
February 1, 2020 Myitter 0
(၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကို ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာနေသူမှ ဆွတ်ခူးရရှိ EPN မြစ်ကြီးနား၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊၁ ​အောင်ဘာ​လေထီ ​(၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကို တနိုင်းမြို့နယ် ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာနေ ဦးလယ်မယ်တားက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့​ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ထီလက်မှတ်ကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဧရိယာဖြန့်ချိရေးမှ တစ်ဆင့်အရောင်းကိုယ်စလှယ်-ကိုဇော်မိုးထွန်း(ရှဒူးဆွတ်)ထံမှဝယ်ခဲ့သည့် ထီနံပါတ် ဠ-၉၁၁၅၄၆ ဖြင့် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း မြစ်ကြီးနားပင်မထီဆိုင်ကြီးမှသိရသည်။ မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဧရိယာဖြန့်ချီရေး […]
ကရင်ပြည်နယ် ဇွဲကပင်တောင် မီးအကြီးကျယ် လောင်နေ….
ကရင်ပြည်နယ် ဇွဲကပင်တောင် မီးအကြီးကျယ် လောင်နေ…. ဘားအံဇွဲကပင်တောင်မှာ ယနေ့ညပိုင်းကပြီးတောမီး လောင်ကျွမ်းနေတာပါ ။ တောင်ခြေက တောတွေမှာ နှစ်တိုင်းနီးပါး မြက်ခြောက်များလောင်းကျွမ်းလေ့ရှိပေမယ့် ဒီတခါမီးများတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ် ။ ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေမီးလောင်နေပါကြောင်း ကပ်ဘေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ငှက်တွေ ကောင်းကင်မှာပျံနေရင်းနဲ့[…]
ထီကိုယ်စားလှယ်က အိမ်ပေါ်ထိတက်ရောင်းလို့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်မိသားစု
ထီကိုယ်စားလှယ်က အိမ်ပေါ်ထိတက်ရောင်းလို့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်မိသားစု ၁၂ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းထီဆုရဲ့ ကံထူးရှင်ကတော့ ကျုံပျော်မြို့နယ် ၊ ဆင် နှစ်ကောင်ကျေးရွာက ကိုဇော်မင်းထွန်း နဲ့ ဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်းတို့ မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ မိသားစုကတော့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုကြီးကို ဠ ၈၅၇၅၂၀ နံပါတ်ဖြင့် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲံတာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဝူဟန်မှကျောင်းသား ၆၃ ဦးကို သွားရောက်ခေါ်ယူသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ”Volunteer သူရဲကောင်းများအဖွဲ့” …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆိုးရွားစွာကူးစက်ဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့သို့ ပညာတော်သင်များအဖြစ် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာကျောင်းသူ/သား ၆၃ ဦးကို ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်)ညနေတွင် သွားရောက်ခေါ်ယူတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဝူဟန်တွင်ပညာသင်ကြားနေသည့် မြန်မာကျောင်းသားများအား မြန်မာအစိုးရက ပြန်ခေါ်ရန်အစီစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ယနေ့ညနေ၌ MNA လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုးရင်းလေယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ခေါ်ယူရန်သေချာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာကျောင်းသား ၆၃ ဦးကို ၎င်းတို့နေထိုင်ရာနေရာများမှ […]
ဝူဟမ်ကကျောင်းသားလေးတွေကို ဒီနေ့ညနေ သွားခေါ် …
ဝူဟမ်ကကျောင်းသားလေးတွေကိုမြန်မာအစိုးရကပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေတာ ဒီနေ့ညနေတော့ MNA လေကြာင်းလိုင်းကဘိုးရင်းနဲ့သွားခေါ် အဆိုပါလေယာဉ်တွင် လေယာဉ်မှူးကြီး Capt Khup Khan Maung ဦးဆောင်သည့် လေယာဉ်မှူး သုံးဦး၊ လေယာဉ်မောင် လေးဦး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှစ်ဦး၊ လေ‌ကြောင်းလိုင်းအမှုထမ်း တစ်ဦးနှင့် ကျန်းမာရေးဘက်မှ ဆရာဝန် သုံးဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့က သွားရောက် ခေါ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ […]
(12)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲရွှေတေးသံမှ ” သိန်း(2000)ကံထူးရှင် ” ….
(12)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲရွှေတေးသံမှ သိန်း(2000)ကံထူးရှင် … ဦးလှတင့် ဓမ္မာရုံလမ်း မုံရွှာမြို့ Ko Myint Soe unicode version (12)ကွိမျမွောကျအောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲရှတေေးသံမှ သိနျး(2000)ကံထူးရှငျ … ဦးလှတငျ့ ဓမ်မာရုံလမျး မုံရှာမွို့ Ko Myint Soe
့လေးစားပါတယ် ဦးဇော်ဇော် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု ကစားသမားတွေ နဲ့ အတူတူ ဖက်ငိုလိုက် ၊ အားပေးလိုက်။
အိပျထဲက စိုကျရတဲ့ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌနရောလုပျမယျ့သူမရှိလို့ ကိုယျ့ငှနေဲ့ကိုယျ အနဈနာခံ လုပျပေးနတေဲ့တဈခကျြနဲ့တငျ မကျြရညျတောကျတောကျကနြတေဲ့ခရိုနီတှနေဲ့ နှိုငျးမရအောငျ သာလို့လေးစားပါတယျ ဦးဇျောဇျော …. ခရိုနီ တှေ ထဲ မှာသူ့ကို သဘော အကဆြုံးပဲ ။ ဘောလုံး လောက မှာ ဆိုရှုံး ရငျ အောကျလကျငယျသား […]
၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၄ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ မားမားခေါက်ဆွဲခြောက် စက်ရုံ မီးလောင်……….
Zawgyi ၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၁၄ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ မားမားခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် Level 1 ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ Update (၁၄ ၀၅)အချိန် Level2ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ Update (၁၄ ၂၃)အချိန် […]